> Resource> Naghachi> HFS Data Recovery - Get Back Data si HFS File System
Isi ihe dị iche n'etiti Windows na Mac data mgbake bụ ndị dị iche iche faịlụ usoro ha na-akwado iche iche. The Windows kọmputa a na-eji NTFS faịlụ usoro, mgbe Mac faịlụ usoro a maara dị ka HFS (hierarchical File usoro). Na ugbu a Mac kọmputa, gụnyere iPod, na-eji a ọhụrụ version nke HFS gbakwunyere na-eji dochie isi faịlụ usoro HFS.
Mgbe ụfọdụ, ndị data ọnwụ nsogbu ime n'ihi na data owuwu ji HFS faịlụ usoro na-echekwa, jikwaa, ohere na ịgbanwe data na-emebi ma ọ bụ merụọ, n'ihi na ọtụtụ ihe mere dị ka virus agha, onye ọrụ njehie, na-ezighị ezi usoro shutdown, usoro okuku, na ịwa usoro malfunction. Mgbe ahụ HFS faịlụ usoro nwere ike na-arụ ọrụ nke ọma. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị HFS faịlụ usoro olu nwere ike ịghọ keerughi na Mac arụ ọrụ usoro. Ma ọ bụ ị na mberede ihichapụ nke faịlụ ma ọ bụ formatting. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, i kwesịrị ime HFS data mgbake ịzọpụta gị furu efu faịlụ na Mac Data Recovery software.
Olee otú ime HFS data mgbake na gị Mac?
E nwere atọ ụdịdị n'ihi na ị na họrọ na-agụnye "ehichapụ File Iweghachite", "Raw Iweghachite" na "Echefuola nkebi Iweghachite":
N'ebe a, anyị ga-eduzi gị na-azụ ahụ furu efu faịlụ site "ehichapụ File Iweghachite", na nzọụkwụ nke na-agbake data ndị yiri n'okpuru ọzọ ụdịdị.
Nzọụkwụ 1: Họrọ HFS faịlụ usoro
Na-agba ọsọ na gị Disk Iweghachite Software maka Mac, ma họrọ mbụ mode nke "ehichapụ File Iweghachite" na ya isi ihuenyo. Wee họrọ HFS faịlụ usoro ebe gị furu efu faịlụ ndị na pịa "Doppler" button na-amalite ịgụ isiokwu. Ọ nwere ike na-agbake furu efu faịlụ site na mpụga ike draịva na USB flash draịva dị iche iche na faịlụ usoro dị ka mma.
Nzọụkwụ 2: Preview na-agbake furu efu faịlụ na ụfọdụ HFS faịlụ usoro
Mgbe iṅomi dị n'elu, na recoverable faịlụ niile ndepụta n'ihi na ị na-ahọrọ. Ị na-enwe ike ihuchalu akwụkwọ, foto na-edebe ihe ochie. Ewerekwa ego-igbe nke furu efu faịlụ nke ị chọrọ iji naghachi na pịa "Naghachi" button.
Cheta na: Ebe i nwere ike iyo na nsonaazụ ọchụchọ ka kpomkwem ịhụ gị ehichapụ faịlụ a na obere oge.
Nzọụkwụ 3: Ezipụta mmepụta nchekwa zọpụta faịlụ mgbe agbake
Tinye ma ọ bụ họrọ a ebe ebe ị chọrọ ịzọpụta lekwasịrị faịlụ, wee pịa "Save" button. Lee, anyị ukwuu ikwu na ị na họrọ ebe ọzọ si gị isi iyi partitions, na ndị ọzọ arụmọrụ dị ka Iṅomi, ihichapụ ma ọ bụ ndị mejupụtara faịlụ na a mebiri emebi HFS faịlụ usoro kwesịkwara izere dị ka ọ pụrụ ogide na overwrite n'ógbè nke furu efu data.
Zuru ezu Ntuziaka nke 3 E Nwere Iweghachite ụdịdị
Ehichapụ File Iweghachite - Ọ bụrụ na ị ihichapụ faịlụ site na ịpị "iwu + ihichapụ" ma ọ bụ efu na ahịhịa, nke a bụ quickest ụzọ ka ị na-ahụ data on HFS faịlụ usoro.
Raw Iweghachite - Ị nwere ike ịhụ gị ehichapụ faịlụ site "ehichapụ File Iweghachite", ma ọ bụ data ọnwụ bụ n'ihi na formatting, virus ma ọ bụ malware agha ma ọ bụ na-ezighị ezi arụmọrụ wdg Nke a ụzọ ga-a ogologo oge iji naghachi data.
Echefuola nkebi Iweghachite - Ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ nkebi ebe gị furu efu data locates, ị nwere ike iji nke a mode ịchọta gị nkebi ahụ na mbụ naghachi data.